Fampandrosoana : tsy afa-misaraka ny prefet sy ny governora | NewsMada
Fampandrosoana : tsy afa-misaraka ny prefet sy ny governora
“Toy ny mpirahalahy mianala ny prefet sy ny governoran’ny faritra. Ny fitsinjaram-pahefana tsy maintsy irosoantsika, tsy afa-miroso irery ny fitsinjaram-pahefana raha tsy miaraka aminy ny fanapariaham-pahefana izay ny prefet eo amin’ny faritra no voalohany indrindra.”
Izay ny fanazavan’ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Razafimahefa Tianarivelo, momba ny andraikitry ny governoram-paritra sy ny prefet eny anivon’ny faritra.
Tsy mbola nisy fotoana miroso mazava be toy izao, raha tsy tamin’ity fitondrana ity. Manoritra mazava ireo anjara andraikitry ny governora ny lalàna 2014-020. Manoritra izany ihany koa ny lalàmpanorenana: fampiroboroboana ara-toekarena sy sosialy any amin’ny faritra no anjara andraikitry ny governora.
Misy koa ny lalàna 2014-021 momba ny fisoloan-tenan’ny fanjakana. Izay no asan’ny prefet eo amin’ny faritra: misolo tena ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, misolo tena ireo mpikamban’ny governemanta rehetra.
Araka ny lalàmpanorenana ny fanendrena governora
Mazava ny voalazany And, 153 ao amin’ny lalàmpanorenana: misy ny hoe fahefana mpanatanteraka any amin’ny faritra, izay tarihin’ny lehiben’ny faritra. Misy ny lalàna 2014-20 ho fanatanterahana an’izay, milaza ao amin’ny And. 325 fa tarihin’ny lehiben’ny faritra ny fahefana mpanatanteraka eny anivon’ny faritra.
Ao amin’ny didim-panjakana manendry ny governoran’ny faritra, mazava ny Andininy voalohany fa ampiasain’ny lehiben’ny faritra ny fahefana mpanatanteraka ao amin’ny faritra, izay mitondra ny anarana hoe governora. “Tsy misy resaka hoe tsy manaraka ny lalàmpanorenana izany”, hoy izy.